अब बेरोजगारलाई भत्ता!
सरकारले बेरोजगार परिचयपत्र प्राप्त नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत बेरोजगार भत्ता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भई संशोधनका क्रममा छ। सरकारले तोकेको तलबमानको २५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ। यो खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ। लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाका लागि रोजगारदाता र […]
सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण रद्ध भएको छैन: चीन
काठमाडौँ : चीनले चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न भ्रमण रद्द भएको भनी मिडियामा आएका समाचारहरुबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार बेइजिङमा आयोजित विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता हुआ चुनयिङले कुटनीतिक च्यानलहरुमार्फत् नेपालसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिइन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चीनसँगको सम्बन्ध विकासमा महत्त्व दिएकोमा चीन सरकारले प्रशंसा गरेको जानकारी पनि उनले दिइन्। बुधबार अन्नपूर्ण […]
वाणिज्य मन्त्रालयले कोलकोत्ता र विशाखापट्टम बन्दरगाहाबाट नेपालका ४ मुख्य नाकामा रेलमार्ग जोड्न भारतसँग प्रस्ताव गरेको छ। रेल सेवा विस्तार गरी बल्क कार्गोमार्फत सामान आयातको व्यवस्था मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत वाणिज्यले प्रस्ताव पठाएको खबर आजको कारोबारमा मोहन गुरूङले लेखेका छन्। तेस्रो मुलुकबाट हुने सामानको ढुवानी बल्क, कार्गो र रेलवे सेवामार्फत सस्तो हुने भएकाले भारतसमक्ष यस्तो प्रस्ताव पठाएको […]
सिन्डिकेट रोक्न कडा सजाय प्रस्ताव
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा तेस्रो संशोधन गर्दै यातायातका क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने तयारी थालेको खबर आजको नागरिकमा प्रविण ढकालले लेखेका छन्। सरकारले सिन्डिकेटका बलमा सडकमा मनपरी गर्दै आइरहेका व्यवसायीलाई लक्षित गरी ऐनमै कडा सजाय र जरिवाना व्यवस्था गर्न लागेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था […]
यातायात ऐनमा संशोधन : ट्रायलमा फेल भएकालाई एक महिनामै फेरि मौका
काठमाडौँ : यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा महत्त्वपूर्ण संशोधनको प्रस्ताव गर्दै आइतबार मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाएको छ। प्रस्ताव मन्त्रालयबाट संसद पुगी पारित भएपछि बल्ल ऐनका रुपमा लागू हुनेछ। यी हुन् संशोधनमा गरिएका केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन- • लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमति पत्र) अब दुई किसिमका हुनेछन्- व्यवसायिक र गैरव्यवसायिक। पेशाका रुपमा कार्य […]
चितवनका ७० प्रतिशत मुसामा भेटियो स्क्रव टाइफस सार्ने ‘माइट’
चितवनमा भेटिएका ७० प्रतिशत मुसामा स्क्रव टाइफस सार्ने किरा (माइट) भेटिएको छ । । स्वास्थ्य सेवा विभागको टोलीले चार दिन लगाएर चितवनका मुसामा गरेको अनुसन्धानबाट यो तथ्य पत्ता लागेको हो । विभागले टोलीले थापेको धरापमा परेका १० वटा मुसामध्ये ७ वटा मुसाको कानमा माइट भेटिएको टोली संयोजक रेशम लामिछानेले जानकारी दिए । ‘र्‍याट्स र्‍याट्स जातको […]
सिरियामा भीषण बम हमला जारी
सिरियामा रुस र अमेरिकाले मध्यस्तता गरेको एक युद्धविराम सम्झौता लागू हुनु एक दिनअघि सिरियाली सरकारी फौजले भीषण बम हमलाहरु जारी राखेका छन्। विद्रोहीहरुले युद्धविराम पालना गर्ने नगर्ने प्रष्ट भइसकेको छैन। सिरियाली अभियानकर्ताहरुका अनुसार इदलिब र अलेप्पो क्षेत्रमा रुसी विमानहरु पनि देखिएका छन्। शनिबारयता हवाई हमलामा परी एक सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको बताइएको छ। सहयता […]
२७ भदौ, काठमाडौं । दिल्लीबाट काठमाडौंका लागि उडेको नेपाल वायुसेवा निगमको विमान आकस्मिक अवतरण गरिएको छ । १६० यात्रु लिएर राति ८ बजे काठमाडौंका लागि उडेको आरए २१८ विमानमा समस्या आएको थियो । उडान भरेको ३२ मिनेटमै विमानमा समस्या आएपछि भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा आकष्मिक अवतरण गरिएको थियो । विमानमा समस्या आउने वित्तिकै पाइलटले […]
एम्नेष्टी ईन्टरनेशनल नेपालको अध्यक्ष पदमा राजन कुईकेल विजयी!
एम्नेष्टी ईन्टरनेशनल नेपालको यही मिति २०७३ साल भाद्र २४–२६ गते पोखरामा सम्मन्न २५ औ वार्षिक साधारण सभामा राजन कुईकेल अध्यक्ष पदमा निर्बाचित हुनुभएको छ । यही भाद्र २६ गते बिहानबाट सुरुभएको मतदानमा कुईँकेलले भारी मत प्राप्त गर्नु भएको छ । अध्यक्ष पदका लागी राजन कुईँकेल, भबानी प्रसाद खरेल तथा उत्तम सापकोटा रहनु भएको थियो । त्यस्तै कोषाद्यक्ष पदमा […]
आत्महत्या गर्ने देशको सूचिमा नेपाल सातौं
काठमाडौं, २६ भदौ–विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई आत्महत्या गरी जीवन अन्त्य गर्ने देशको सूचीमा सातौं स्थानमा राखेको आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ । नेपालमा बर्सेनि औसत ६ हजार ८ सय ४० जनाले आत्महत्या गन गरेको संगठनले जनाएको छ । तथ्यांक अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष ८ लाख मानिसले आत्महत्या गर्छन् । जसमध्ये हरेक ४० सेकेन्ड एक व्यक्तिको […]
भूकम्पपछि एउटै स्कुल बनाएन सरकारले
भाद्र २६, २०७३- भूकम्पले सीतापाइलाको युवा सहभागिता माविको भवन पूरै भत्कियो। विद्यालयले भूकम्पलगत्तै कक्षा चलाउन निजी जग्गामा टहरा बनायो। विनोद थापाको १० आना जग्गामा एकदेखि ६ कक्षासम्मका लागि टहरा बनाइयो भने अर्का व्यक्तिको एक रोपनी जग्गामा ७ देखि १० कक्षासम्मको कक्षा चलाउन मान्द्रोले बारेर कोठा बारियो। मान्द्रो कुहिएपछि वरिपरि जस्तापाता लगाएर १६ महिनादेखि जेनतेन कक्षा […]
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै कर्णालीका जिल्लामा मान्छे जन्मदा र मृत्यु हुँदा प्रतिपरिवार २० किलो चामल निःशुल्क दिने घोषणाको बिरोधमा कर्णालीबासीले सरकारलाई नै कर्णालीबाट चामल फिर्ता पठाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको दल माओवादी केन्द्रलगायत सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ। माओवादी […]
Page 1244 of 1279